Kooxda Inter Milan oo ay waajib ku tahay inay iibiso Mauro Icardi si ay ula saxiixato Romelu Lukaku – Gool FM
Kooxda Inter Milan oo ay waajib ku tahay inay iibiso Mauro Icardi si ay ula saxiixato Romelu Lukaku
(Milano) 20 Juunyo 2019. Kooxda kubadda cagta Inter Milan ee dalka Talyaaniga ayaa la soo warinayaa inay waajib ku tahay inay iska iibiso xagaagan weeraryahankeeda Mauro Icardi, haddii ay doonayaan inay la soo wareegaan dhaliyaha Naadiga Manchester United ee Romelu Lukaku.
Macallinka cusub ee dhawaan loo magacaabay kooxda Inter ee Antonio Conte ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu soo qaato Lukaku iyo xiddigo kale, waxaana uu doonayaa inuu labadaan weeraryahan wadajir u haysto si uu ugu tartamo hanashada horyaalka Serie A.
Yeelkeede, waxaa waajib ku ah Inter Milan inay sidoo kale ka fogaadaan xeerka dhaqaala wanaagga ee FFP, taasoo la micno ah haddii ay doonayaan inay la soo wareegaan Lukaku inay iska iibiyaan mid ka mid ah xiddigahooda.
Jariiradda The Telegraph ayaa warinaysa in Inter Milan ay u baahan tahay inay iska iibiso Icardi, si ay booskiisa ula soo wareegto oo ay u dhammaystirto heshiiska xiddiga xulka qaranka Belgium ee Lukaku.
Wararku waxa ay intaa ku darayaan in kooxda reer Talyaani ay isku dayeyso inay Icardi u isticmaasho oo ay qeyb uga dhigto heshiiska ay ku soo qaadanayso Lukaku suuqa kala iibsiga xiddigaha ee xagaagan, inkastoo ay u muuqato inaysan dooneynin kooxda Man United.
Icardi ayaa laga saaray sawirka kooxda koowaad Inter intii lagu guda jiray qeybtii labaad ee xilli ciyaareedka, taasoo lagu micneeyey in wakhtigii Icardi ee garoonka San Siro uu soo dhammaaday.
Muxuu ka yiri Lionel Messi kulankii ay barbaraha la galeen Xulka qaranka Paraguay??
Kooxda Juventus oo Douglas Costa iyo lacag kaash ah isku daraysa si ay u soo ceshato Paul Pogba